သက်ဝေ: Challenge / Dictionary / အေးမောင် နဲ့ မီးဖိုချောင်
ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) February 15, 2013 at 11:42 AM
ဟားဟား.... အမသက်ဝေလုပ်မှပဲ.... ကော်နီကြီးလည်းဦးအေးမောင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်..... တောင်ပံကြီးတပ်ပြီး မီးဖိုထဲခုန်ဆင်းသွားတဲ့ပုံကြီးကိုလည်း မြင်ယောင်လာတယ်....
oomh February 15, 2013 at 11:54 AM
ဇွန်မိုးစက် February 15, 2013 at 11:54 AM
မမရေ...ဖတ်နေရင်းနဲ့ ပြုံးလိုက်ရတာ။ ရုံးမှာဆိုတော့ မရယ်ရဲဘူး၊ ဘေးက မန်နေဂျာရှိနေလို့...အောင့်ထားရတယ်။ :D
သီချင်းစာသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်း ခဏခဏ အငြင်းအခုံဖြစ်ဖူးတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗဒင် သီချင်းတွေ ခေတ်စားကာစ... သုံးလေးပုဒ်လောက်မှာကို ငြင်းစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာ၊ သူကြားတာ မှန်တယ်၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ်ကြားတာမှန်တယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံး သီချင်းစာအုပ်ထွက်လာမှပဲ အမှန်ကို သိတော့တယ်။ ဒါတောင် မောင်လေးက အလျှော့မပေးဘဲ အဲဒီသီချင်းတွေဆိုတိုင်း နဂိုသူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဆက်ဆိုတာ...။ :)
သောကြာနေ့အတွက် ပြုံးစရာပို့စ်လေး တင်ပေးတဲ့ အမသက်ဝေကို <3 <3 <3
နန်းညီ February 15, 2013 at 12:10 PM
မမသက်ဝေက မမေးမြန်းတာ.. နန်းညီကျတော့ မတရား အမေးမြန်းထူတာ.. တခါတလေကျရင် ဂွကျကျတွေမေးလွန်းလို့.. ၃ တန်းလောက်ကလားမသိဘူး.. အဒေါ်ဆီစာရေးတာ.. (သမီးကိုလွမ်းလာဟင်).. လို့ရေးမလို့ကို.. ဟင် ကို မရေးတတ်လို့ အမေကို သွားမေးတာ.. ဟင် ဆိုတာက စာရေးလိုက်ရင် အသံက တမျိုး.. ဟ သံ ပီသတယ်မဟုတ်လား.. ဟင် လို့ စကားပြောရင် အသံကတမျိုးလေ.. အဲ့ဒါကို အဲ့အသံအတိုင်း ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းလဲလို့ အတင်းမေးနေလို့.. အမေက ဟ နဲ့ ပေါင်းတယ်ပြောလည်း လက်မခံဘူးဖြစ်နေတာ.. အတော် ရှင်း ယူရတယ်.. =D
P.Ti February 15, 2013 at 12:30 PM
ဒါတော့ အမနဲ့ ကျွန်တော် နည်းနည်းတူတယ်။
ကိုယ်ထင်ရာမြင်ရာ ကိုယ့်စိတ်ကူး ကိုယ့်အတွေအတိုင်းပဲထားလိုက်တာများတယ်။
ငယ်ငယ်က အယ်ခွန်းရီ သီချင်းဆိုတာ စင်ဒရဲလား ၀ူး-၀ူး-၀ူး စင်ဒရဲလား လို့ဆိုတာ ဆင်ကြီးလား ၀ူး-၀ူး-၀ူး ဆင်ကြီးလား လို့ကြားတယ်၊
မျိုးကျော့မြိုင်က သူ့နာမည်ကို သီချင်းထဲထည့်ဆိုတာ၊ ရူးကြောင်ကြောင် လို့ ကြားတယ်။
စဉ်းစားလိုက်ရင် အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ် ... ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်....
Evy February 15, 2013 at 12:51 PM
hahahaha ရီလိုက်ရတာ အစ်မရယ်။ ရုံးမှာ ဘယ်သူမှ မရှိလို့တော်သေးတယ်။ အေးမောင်ရေ လို့ ခေါ်တယ်ထင်တာကို ရီလိုက်ရတာ.
KK February 15, 2013 at 1:22 PM
ဒါမှချစ်တဲ့သူရှိရာ မင်းလိုပဲ တို့လဲပျံနိုင်မယ်လို့ထင်နေတာ...အခုမှမှားမှန်းသိတယ်..
ကော်နီ အေးမောင်ရေ ခေါ်နေတယ်လို့ ကြားမိတာချင်း တူတယ်တော် ...။
ညီမရဲ့ အစ်မကြီးကတော့ မေခလာသီချင်း..
လူကို လိုက်ကြည့်တယ် ..အိမ်ကိုလိုက်ကြည့်တယ် ...
အဲ့သျီချင်းထဲက ... ရပ် .. ဒီမှာတင်ရပ် ဆိုတဲ့နေရာကို .. ရပ် တမာပင်ရပ် လိူု့ ကြားပြီး တမာပင်နားမှာ ရပ်ကျန်ခဲ့ခိုင်းတာ မှတ်နေတာတဲ့ :P
Ma Tint February 15, 2013 at 6:03 PM
ရယ်မောခြင်းသည် အသက်ကို ရှည်စေတယ်တဲ့
ဒီကနေ့တော့ အသက်တစ်ရက်ပိုရှည်သွားပြီး)
အေးမောင်တို့ မီးဖိုချောင်တို့အကြောင်း အိမ်ကလူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းထားတယ် :P
အပြုံးပန်း February 15, 2013 at 6:31 PM
ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးခွန်းသိပ်မမေးတတ်တာချင်းတူ တယ် အမ၊
သိလို့မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာမေး ကိုယ့်ဘာသာဖြေနဲ့ တယောက်တည်း အလုပ်တွေ ရူပ်နေခဲ့တာပေ့ါ၊
သီချင်းတွေထဲက ကြားရတဲ့ အလွဲတွေလဲ ရှိတယ်၊ လူတိုင်းမှားတတ်တဲ့ သီချင်းတခုရှိတယ်လေ၊
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်း၊ ငိုအောင်လေ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗိုလ်အောင်ဒင် လို့ ကြားတဲ့ သီချင်းမျိုးပေါ့။
ကွန်မန့်ကို ဖတ်တော့လဲ ရယ်ရသေးတယ်၊
စိတ်ထဲကနေ ရယ်လိုက်ရပေမယ့် လူက ရွှင်လန်းသွားတယ် အမ။
pandora February 15, 2013 at 10:38 PM
ကြားဖူးတာတစ်ခုက ဦးဘညွှန့်က ဝင်းဦးတို့ခေတ် သီချင်းထဲမှာ ဝူရှီကာလို အသည်းကွဲတာ မဆန်းပါဘူး ဆိုတာ ပါသတဲ့။ ဒီတော ဝူရှီကာလိုဆိုတာ ဘာပါလိမ့် ဆိုပြီး လိုက်ရှာတာ မြန်မာဝေါဟာရမှာ မတွေ့လို့ ဂျပန်ဝေါဟာရအထိ ရောက်သွားတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ ၀ူရှီကာလိုဆိုတဲ့ ဂျပန်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု တွေ့သတဲ့။ ဒီတော့ဦးဘညွန့်က ဝင်းဦးကို မင်းတို့ခေတ်လူငယ်တွေများ တော်လိုက်ကြတာ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ဝင်းဦးက ပြန်ပြောသတဲ့ မဟုတ်ပါဘူး အဖေရယ် ဝဋ်ရှိခဲ့လို့ အသည်းကွဲတာ မဆန်းပါဘူး လို့ဆိုတာပါ ဆိုတော့ ပက်လက်လန်ရောပဲ တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။ ကြားဖူးတာကိုပြောတာပါ။း)
ခင်မင်းဇော် February 15, 2013 at 11:33 PM
ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ ညီမသက်ဝေရေ။ အမကျတော့ မေခလာသီချင်း ။ ကိုကိုတဦးတည်း ထာဝစဉ်အသည်းအသက်ရေဆက်လို့ချစ်ကြမယ် အလွမ်းများ ဝေးပါစေကွယ်။ ဆိုတာကို ကိုကိုကျုနေ ထာဝစဉ် အသည်းအသက်ရေ... မဟုတ်မှန်းလဲ သိနေပြီး ဘယ်လိုမှလဲ မစဉ်းစားတတ်ခဲ့ပဲ အဲဒီတိုင်း ဆိုနေတာ ဟိဟိ။ သီချင်းတွေမှာတော့ အဲလိုဖြစ်တာ များပါတယ်။ ကော်နီသီချင်း ကိုကိုချစ်ရေကိုလဲ အမ ရဲ့ အမ၀မ်းကွဲတယောက်က နာမည်လေးတခုပေးမယ် ကြားလား ဆိုတာကို သူက သကြားလုံးပဲ ကြားနေတာ။ အဲဒီသီချင်း သူဆိုရင် နာမည်လေးတခုပေးမယ် သကြားလုံး တဲ့။
ညီလင်းသစ် February 16, 2013 at 12:22 AM
အပေါ်က ကြောင်ရင်သားကြီး တို့၊ ဒစ်ရှင်နာရီ တို့နဲ့ ပြုံးလာလိုက်တာ.. အောက်ဖက်က အေးမောင်နဲ့လည်း တွေ့ရော တဟားဟားကို အော်ရယ်မိတော့တယ်..၊းD
တော်သေးတယ်၊ တောင်ပံလေးများ လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ မီးဖိုထဲက ချစ်သူကို တောင်ပံဟင်းတစ်ခွက် ချက်ခိုင်းဖို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆက်ပြီး မတွေးတာ..၊း) ငယ်ဘဝမှာ အများကြီး တွေးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့တွေးလုံး တွေလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျို့....။း) (မချွန်၊ မကြပ်ဘဲ အတည် ပြောသွားသူ..)
မေဓာဝီ February 16, 2013 at 8:01 AM
ရယ်လိုက်ရတာ အမသက်ဝေ ...
ဒစ်ရှင်နာရီကို အမသက်ဝေ တွေးသလိုပဲ တွေးခဲ့မိဖူးတယ် ... ။ အမသက်ဝေလုပ်မှ တက္ကသိုလ်အေးမောင်လဲ မနေရပါလားနော် ...
မနေ့က တီတင့်နဲ့တွေ့တော့တောင် အမသက်ဝေရဲ့ ဒီပို့စ် အကြောင်း ပြောပြီး ရယ်ရသေးတယ်။
ခေတ္တနားခိုခြင်း သည်းခံပါ ဆိုတာကို
ခစ်တနား ခိုခြင်း သည်းခံပါ မှတ်နေတာ ..ဘယ်သူ့ခိုထည့်ထားတဲ့ခြင်းက ဘာလုပ်နေလို့ပါလဲပေါ့
သက်ဝေ February 16, 2013 at 10:31 AM
Facebook ပေါ်မှာသာ အတွေ့ များပြီး Blog မှာ သိပ်မတွေ့ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော စာရေးဖေါ်မောင်နှမတွေကိုပါ ဒီပိုစ့်မှာ ပြန်ရှာတွေ့ လိုက်လို့အရမ်းပျော်နေတယ်... ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်နော်...
You all make my day brighter...!! <3 <3 <3
မိုးငွေ့........ February 16, 2013 at 3:41 PM
တပြုံးပြုံးနဲ့ဖတ်လာရင်း နောက်ဆုံး ဒါမှချစ်တဲ့သူရှိရာ မီးဖိုထဲ တို့လဲပျံနိုင်တယ်ကို အသံထွက်ပြီး ဆိုမိလျက်သားဖြစ်သွားတယ် ဟဟ...။
i cant stop laughing . thank you
ကြည်ဖြူပိုင် February 16, 2013 at 8:51 PM
နေလင်းအောင် Nay Lin Aung February 17, 2013 at 8:03 PM
အစ်မရေ... ဖတ်ရူ့ပြီး ရယ်မောသွားပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်စရာ စာသားလေးတွေကြောင့် ကျွန်တော် အရမ်းကို ပျော်သွားပါတယ်
ညိုလေးနေ February 18, 2013 at 10:09 PM
အဲဒီ့လောက် မရယ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ
ponyate February 19, 2013 at 10:01 AM
ဒစ်ရှင်နာရီ တစ်လုံးလောက် ၀ယ်ပေးပါလို့ အချစ်ကို ပူဆာရမယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 19, 2013 at 11:59 PM
မြသွေးနီ February 20, 2013 at 5:20 PM
မြသွေးလည်း ငယ်ငယ်လေးက တလွဲကြားခဲ့ဘူးတာလေး ပြောပြချင်မိတယ်။
အဲ့တုန်းက တော်လှန်ရေးနေ့ ချီတက်ချိန် သီချင်းလွှင့်တာ နားထောင်လိုက်တာ...
“တို့ဗမာတွေ ပဲဟင်းစားလို့ အိမ်သာမှာတန်းစီ...” တဲ့..။
နောက်ဆို အေးမောင်ကိုမှန်မှန်ပြောခိုင်းပါတော့မယ် မမရယ်... မီးဖိုထဲတော့မပျံပါရစေနဲ့တော့....
ငယ်ငယ်တုံးက ကာတွန်းတွေ “စ”ပြီးဖတ်တတ်ခါစမှာ ကာတွန်းထဲမှာပါတဲ.
ဂါ ၇၀ ( ဂါ ခုနစ်ဆယ်) ပြုတယ်ချည်းဘဲဖတ်မိတယ်။
အဲ.ဒီတုံးက ဘာအဓိပါယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို.ကိုမရခဲ.တာ။
ရွှေအိမ်စည် February 28, 2013 at 8:54 PM
ဦးအေးမောင်ကြီးကို ထပ်လာရယ်သွားတယ် မမ
စိတ်တွေနွမ်းလျ နေတဲ့အချိန်မှာ မမပို့စ်ကလေးဖတ်ရတာ ပြုံးပျော်ရတယ် :))
post ဖတ်ပြီး မန့်ပြီးသွား ပေမယ့် ထပ်ပြောစရာရှိလို့ ရောက်ခဲ့တယ် မမရေ....
ညီမ ငယ်ငယ်ထဲက မနေ့ကထိ ကိုင်ဇာရဲ့ ရွှေရတုအချစ်သီချင်းကြားရင်....
မနေ့ကမှ youtube မှာပြန်ကြည့်မိတော့မှ " ရော့ခ်အင်ရိုးတွေ ချားချားအကတွေ" လို့ဆိုမှန်းသိတော့တယ်.......... :))
T T Sweet March 28, 2013 at 8:23 PM
ဟဟ ... ရယ်ရတယ်။ ကြောင်ရင်သားကြီးက အရယ်ရဆုံးပဲ။ ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ တွေးတတ်တာ ယုံပါတယ် ... အရင်းကြီးတွေပဲဟာကို ...း))
တို့လဲ ငယ်ငယ်က မေဆွိရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်း "မုန်းစိတ်ဟာ သိမ်းခိုပြည်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်းလောင်ကာလေ.... " ဆိုတာကို " လက်က မေးစေ့ကို ဆွဲပွတ်ပြီး မုတ်ဆိတ်ဟာ သိပ်ကိုပြည်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်းလောင်ကာလေ" ဆို လုပ်ပလိုက်တာ။ တို့တွေနဲ့ တွေ့မှ မေဆွိ အလွမ်းသီချင်းလဲ မုတ်ဆိတ်တွေ မီးလောင်ကုန်ရော။း)
Thwin May 22, 2013 at 9:50 PM
မမသက် တစ်ကယ်ကို ရီမိတယ်...။ မမသက် က အဲလိုပဲလား..။